🥇 ▷ figraddani waxay qiyaaseysaa Dualshock 5 & # 039; Pro & # 039; ✅
figraddani waxay qiyaaseysaa Dualshock 5 & # 039; Pro & # 039;
Koboca joogtada ah ee hababka kumbuyuutarrada, cayaaraha tartamada iyo isboortiga elektiroonigga ah ayaa dhalisay in xulashooyin badan oo dheeraad ah. maamule xirfad leh. MicrosoftTusaale ahaan, waxaad leedahay xakameeyaha Xbox Elite illaa iyo 2015 waxayna noqotay mid ka mid ah kontaroolada ugu fiican hadda. Sony, Dhanka kale, waxay door bidaa inay ka sii fogaato suuqaas., inkasta oo ay jiraan xaqiiqda in ay jiraan ciyaartoy badan oo PlayStation ah oo sugaya xakameynta ‘Pro’ ee astaanta Jabbaan.
In kasta oo ay dhawaan Sony sii deysay qalab dheeri ah, qeybta dambe ee badhanka, kaas oo badhamooyin dheeri ah ku dareysa Dualshock 4, soojeedinta wali kuma filna ciyaartoy gaar ah. Dabcan, jiritaanka aaladahaani waxay muujinayaan taas, iyadoo wadadii PlayStation 5 Shirkadda ayaa xiiseyneysa inay gasho kontaroolka xirfadlaha ah. Dabcan, waa arin waqti kahor intaan qof male awaalin waxa Dualshock 5 ‘Pro’.
Giuseppe Spinelli, farshaxan sameeya Dualshock 5 ka turjumaya ku saabsanaan shatiga Sony, wuxuu hadda abuuray xirfad kala duwanaansho xirfadeed. Sida aad ku arki karto fiidiyowga, wuxuu isku daraa inta badan astaamaha ay ciyaartoydu ku raadiyaan badeecadan noocan ah. Kicinta dheeriga ah ee dhabarka, stem isweydaarsan, soo xulo profaili, batari waarta iyo guri, iyo kuwo kale.
Intaa waxaa sii dheer, Spinelli wuxuu ka faa’iidaystay dhowr astaamood oo cusub oo la xaqiijiyay, sida mashiinka dhijitaalka oo beddelay gariir dhaqameed, kaas oo kicinta waxyaabaha kiciya loogu talagalay soo saareyaasha iyo dekedaha USB-C. Shaki la’aan waa mid aad u soo jiidasho leh wakiil, adkeynaysa in la aamino inay waligeed run noqoto. Soo saarista fiidiyowgu wax shaqo ah kuma lahan soosaaraha soo-saaraha soo-saaraha.
Miyaad arki doontaa qof xirfadle ah oo Sony hago ah? Kaliya bishii Diseembar, shirkaddu waxay diiwaangelisay patent kale oo ‘Dualshock’ kaas oo sheeko xariiqda ugu weyni ay ahayd 4 badhan oo dheeraad ah, 2 ka mid ahi ay ku yaalliin dhinaca dambe iyo lammaanaha kale ee aagga hoose; Tan waxaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo baahida ciyaaryahanka. Ma dafiri kartid taas kuwa Jabaan jooga ayaa danaynaya xakamaynta noocan ah, iyo laga yaabee inay dhamaantood kuxirantahay helitaanka badhanka dib u laabashada.